Lesona 7: Avy tao an-davaky ny liona mankamin'ny fonenan'ny anjely
Rehefa nifehy an'i Babilôna ny Medianina sy Persianina dia nahita ny fahendren'i Daniela i Dariosa Medianina ka niantso azy ho isan'ny fitondram-panjakana. Nanatanteraka tsara ny asany i Daniela ka notendren'ny mpanjaka ho iray amin'ireo mpitarika lehibe teo amin'ny fanjakana.
Nialona fatratra ny fahombiazan'i Daniela ireo mpitarika hafa teo amin'ny fanjakana. Mialoha ny fiafaran'ny tantara anefa dia nasehon'i Daniela fa nahatoky tamin'Andriamanitra sy ny mpanjaka izy. Azo antoka fa nahatonga azy ho mahatoky tamin'ny hafa ny fahatokiany tamin'Andriamanitra.
Maneho amintsika ny toe-javatra hiseho amin'ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro farany ny fanandramana niainan'i Daniela. Asehon'izany tantara izany amintsika koa fa hamely ny vahoakan'Andriamanitra noho ny finoany i Satana. Ho avy, araka izany, ny fotoan-tsarotra eo amin'ny ady hifanandrinana amin'ny ratsy, kanefa mahazo matoky isika fa handresy Andriamanitra ary hamonjy ny olony. Hiampanga ireo vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro farany ho tompon'andraikitra amin'ny fahoriana eto an-tany i Satana, saingy hasehon'Andriamanitra fa tsy manan-tsiny ny olony. Tsy misy heloka hanomezan-tsiny azy ireo.